Bulldozer, Excavator, Loaderan'ny kodia, Fitaovana famaohana pipay - Shehwa
Bulldozer amin'ny ala
Fitaovana fanaovana pipelay
Fanohanana momba ny kojakoja
Miezaka ny ho mpanamboatra kalitao avo lenta izahay
SWMC-X5 Hydro ary atsofohy
SWMC-370-DTH misisika crawler nitaingina ambonin'ny ...
(Ity dia antsoina hoe SWMC) dia orinasa iray an'ny HBXG tany am-boalohany niaraka tamin'ny orinasa lehibe hamatsy ny ripper, ny elatra, ny undercarrie, ny trano misy fizarana herinaratra ary ny fivoriambe farany mitondra fiara ho an'ny bulldozers, ary koa ny ampahany sy ny singa amin'ny milina fitrandrahana, toy ny chassis, ny track assembling, ny rooler ary ny hazo amin'ny rigs fandavahana. Tamin'ny 2010, taorian'ny fanovan'ny orinasa, lasa mpanamboatra manokana ny milina fananganana sy milina fitrandrahana ny SWMC…
MBOLA HITADINIKA bebe kokoa
Mikasa ny hametraka ny famokarana vokatra feno indrindra
sy ivontoerana fivarotana
Adiresy: Yard No.172, Road Shengtai, Xuanhua, Zhangjiakou, Provinsi Hebei, Sina
Ny SWMC 370 subsigface fandavahana farany vita soa aman-tsara ny tetik'asa fananganana fototra amin'ny tetikasa trano sy tany Guangzhou, Sina. Tetikasa momba ny tany sy trano any Guangzhou dia mandrakotra velarana 62000 m2, izay misy 44.000 m2 i ...
Noho ny tsy fahampian'ny herin'ny nentim-paharazana nentim-paharazana, ny fampandrosoana sy ny fampiasana angovo vaovao dia nahasarika ny sain'ny firenena rehetra manerantany. Mandritra izany fotoana izany, ny angovo vaovao photovoltaic an'i Shina dia ...
Septambra - Fahatongavan'ny volana fararano, fotoam-pijinjana misy voankazo manankarena ary hanitra manely! Nahomby ilay bulldozer izay mampiditra ny asa mafy ataon'ny mpiasan'ny HBXG ”ho an'ny Tetikasa Petroplem Rosiana azon'i HBXG ...
SWMC, mpanamboatra milina fandavahana, amin'ny fomba fanomezana vokatra milina feno ho an'ny mpanjifa, dia mampiasa traikefa an-tsokosoko mihoatra ny 20 taona hanomezana dril azo itokisana ...
Tamin'ny Mar.12th, 2020, andiana bulldozer ambony-sprocket SD7N dia nalefa tany amin'ny seranana ary vonona ny hamidy ho an'ny tsenan'ny faritra Russia & CIS. Ity bulldozers batch ity dia novidian'ny klioban'ny harena ankibon'ny tany ...